लुम्बिनीको राजनीतिः शंकर पोखरेललाई अझै एउटा डर !
बुटबल । आइतबार बिहानदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति झनै तातिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकाबिहानै पदबाट राजीनामा दिएपछि देशको राजनीति नै तरंगित बन्न पुगेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबारबाट नै लुम्बिनीको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, पोखरेलको राजीनामा आएपछि उक्त कार्यसूची प्रभावित बनेको छ । उनले अकास्मात राजीनामा दिनुको मुख्य कारण नेकपा एमालेको नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्नु हो । प्रदेशको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि पुनः पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ४ जना सांसद तथा माओवादी केन्द्रले २ जना सांसदलाई कारबाही गर्दा एमालेलाई फाइदा भयो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल ८७ जना सांसद रहेको भएपछि जसपाले ४ जना तथा माओवादी केन्द्रले २ जना सांसदलाई कारबाही गर्दा जम्मा ८१ जनामात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशमा एमालेसँगमात्रै ४१ जना सांसद रहेका छन् । बहुमतको सरकार बनाउन ४१ जना सांसद नै पर्याप्त हुने भएको कारण पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई जना तथा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन्।
लुम्बिनीमा अर्को तरंगः सांसद वली माओवादीमा लागेपछि एमालेको बहुमत नपुग्ने !
अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना रहेको थियो । तर, कर्णाली प्रदेशमा जस्तो घटना लुम्बिनीमा हुन पाएको छैन । लुम्बिनीको एमाले संसदीय दलले एमालेको नेतृत्वमा नै सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, संसदको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने उल्लेख भएको बेला पोखरेलको राजीनामा आएपछि यस्तो बेला के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव छलेर पुनः पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने भन्दै लुम्बिनी कांग्रेसले विरोध गरेको छ । लुम्बिनीको घटनाले राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद जन्माएको छ ।
एमाले संसदीय दलले प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताए पनि प्रदेश सभामुखले संसदमा दर्ता भएको र कार्यसूचीमा चढिसकेको भन्दै अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल र मतदात गराइदिए भने झनै संकट गहिरिनेछ । पोखरेललाई प्रदेशमा सभामुख माओवादी केन्द्रका नेता भएको कारण एउटा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गरेर मतदान गराइदिनसक्ने डर भएको स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि डर रहेको छ । विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने डर पनि उनलाई रहेको छ ।
प्रदेशका कामचलाउ मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस पत्र पठाएका छन् ।